musha South AMERICA FOOTBALL STORies Vatambi veBrazil Vanotamba Neymar Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
Yakapedzisira Kugadziriswa pane Dai 24, 2020
Yedu Neymar Biography Chokwadi inopa yakakwana kuvharidzirwa Yenyaya Yehudiki Nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Chokwadi chemhuri, Mukadzi, Vana, Hupenyu hwePamoyo uye Mararamiro. Chokwadi ndechekuti, tinokupa kuongororwa kuzere kweNyaya Yehupenyu Hwake, kutanga kubva pamazuva Ekutanga aNeymar kusvika paakabudirira.
Hongu, munhu wose anoziva nezvehutano hwake hunobata meso uye zvakasarudzwa zveBonon d'Or. Kunyange zvakadaro, vashoma chete vateki vanoziva zvakawanda nezveNeymar Jr's Bio iyo inonakidza chaizvo. Iye zvino pasina kunze kwekuita, ngatitangei.
Neymar Nyaya Yemwana:
Neymar da Silva Santos Júnior akaberekwa pa 5th yaFebruary 1992 kuMogi das Cruzes, São Paulo, Brazil. Akaberekerwa nababa vake, Neymar Santos Sr (aimbova mutambi wenhabvu) uye kuna amai vake, Nadine Santos.
Pazera remwedzi mina, Neymar akashamiswa nechishamiso chekufa kwemotokari inouraya. Kuparara kwemotokari inouraya kwakakonzerwa nemotokari inouya yakanga isingabatsiri inopinda mugomo rakadzika mumotokari yemhuri yake sezvavakanga vari munzira yekushanyira hama dzavo.
Nenzira yakanaka, Baby Neymar uyo akachengetwa pachigaro checheche akagara pachigaro chepamusoro chemotokari akapona pangozi uye akabudiswa asina kubatwa.
Neymar - Kukura Makore:
Apo mumwe akatarisa genius yemutambo nhasi, zvingava zvakaoma kutenda kuti haana kumbova nehutano hwakanaka. Muzvokwadi, mhuri yake yakanga yakazara tsvina panguva yakaberekwa. Baba vake, Neymar Sr vaifanira kushanda mabasa akawanda kuti vararamire mhuri yavo. Zvisinei, vakakwanisa kupemberera zuva rekutanga reNeymar.
Nokudaro, apo Neymar aive nemakore ekuchikoro (akafananidzirwa pasi apa), akanyoresa kuchikoro chinokodzera yake ilk. Kudzoka kumba shure kwekuchikoro, mhuri yake yakanga isina magetsi nekuda kwekuti vakanga vasingakwanisi kuitenga, chiitiko chakaita kuti Neymar nemukoma wake muduku vasimudze makenduru semugove wega wekuvhenekera kudzidza.
Neymar Sr paaida kurwira mhuri yake, mwanakomana wake Neymar Jr akawana ndokutanga kusimbisa tarenda rake mubhola. Kusiyana nezvimwe zvipfeko kune pfuma yevasiki, Neymar basa mubhodhi rakasimuka kubva mudare rebhasikiti uye kwete munda wekutamba.
Akadzidza kutamba Futsal uye akazvichengetedza mumutambo wechipfuwo unozivikanwa nekukanda bhora rakaoma bhora risingaiti zvakawanda. Nokuda kwezvisikwa uye kukanganisa kunoitwa nemutambo unoitwa mudare rebhasikiti, Neymar akakwanisa kudzidza nekuvandudza unyanzvi hunoshamisa hwaanoratidza nhasi mumatambo emabhora.
Mune nguva, akave akakurumbira pakati pezera rake mumigwagwa akatora unyanzvi hwake. Neymar Sr. anobvuma unyanzvi mwanakomana wake aive nawo uye dzimwe nguva akatora nguva kubva pamarongwa ake akabatikana kufamba nevechidiki Neymar pasi peshoko rebasa.
Nezve Vabereki vaNeymar:
Kune vakawanda, genetics ye Neymar Jr's vabereki inosanganisira kukodzera zvakakwana kune mwana mukuru wemwanakomana. Idzo dzakanga dziri mbiri dzakanaka dzezvigadzirwa zvezvakaberekwa izvo zvakabereka kazhinji kemajeri ejeri.
Neymar kazhinji anogamuchira kutsvoda kaviri kubva kwavari vasati vambova futsal uye mitambo yemigwagwa. Rudo rwacho rwakanga rusina nguva uye rwakanga rusingazivi miganho, rwakaenderera mberi nepo Neymar aive paSantos yake yekutanga kambani yeruzhinji (inoratidzwa pasi apa).
Mushure mekutsvoda kwakadai, vabereki vake vaiwanzomuudza;
... ''Zvichida, kuguma uye kuguma zvingadai zvakupa vabereki vari nani kupfuura isu. Asi hapana chingave chakatipa mwanakomana akanaka kupfuura iwe. Tinokuda iwe mwanakomana, iwe ndiwe wakanakisisa. Iye zvino. FAMBA UYE PEDZA VARI VOSE! "...
Neymar Biografia - Basa Riri Mubasa reSantos Head Coach:
Neymar paakanga achiri kuSantos, akaita basa rinokosha mune chimwe chiitiko chakatungamirira kuhomwe yemudzidzisi wechikwata, Dorival Junior. Chiitiko chacho chakatangwa apo Dorival Junior akadzivisa Neymar kuti atore chirango chakakundwa. Nharo yacho yakagoverwa kune mumwe mutambi anonzi Marcel, chiitiko chakaita kuti Neymar atsamwa. Paakadzokera kubhenji, akarwisa zvine utsinye chisarudzo chomudzidzisi wekuti iye aifanira kudziviswa nemunhu anoshanda.
Asi Neymar akakumbira ruregerero nekuda kwekuita kwake kusina mutemo asi mudzidzisi mukuru akasarudza kumuranga nokusiya kunze kwechikwata chechikwata panguva yekuti aite classic math pamusoro pevaKorinte.
Bhodhi revatungamiri avo vaifarira Neymar vakanga vasina kufara nechisarudzo cheDorival Junior uye vakasarudza kumuchengeta. Kudzingwa kwaDorival kwakaratidza kuti Neymar akanga asiri mutambi anokosha wechikwata asi ainzi seakasanangurwa uyo aizodzivirira bhora reBrazil.
"The Toiss" ndeye 4 shamwari dzese dzeNeymar dzave dzichibatsira mukusimudzira basa rake rebhora. Vanoita mabasa makuru evanoshamwaridzana navo shamwari kusanganisira kugadzira zvikumbiro zvejeresi uye autographs vachisiya Neymar vachitarisa panzvimbo.
Chikonzero Chikonzero Chokutamba Nhemberero:
Neymar akatumidzwa zita rokuti 'Lord of the Night' neavo vanobatana navo muBaça yekupfeka chikafu nekuda kwekuti ane chido chokunakidzwa noupenyu, zvikuru kana panouya usiku huno ne "The Toiss".
Nyeredzi yeBrazilian inoda zita rezita rainzi zita reBatman. Akaitamba panhengo ye'Halloween 'ye2015 paakaonekwa akapfekedzwa mumasikisi aBatman ane mazuru aDracula.
Apo vamwe vanotora vasikana vavo kune Mapato, Neymar anoita zvinopesana. Anotora mudzimai wake. Maererano naye,
"Amai vanomhanya mhuri. Ndiye rudzi rwomunhu uyo, kunze kwake, isu tingarasika. Anotitsigira. Ndakaswedera pedyo naamai vangu apo vana vomumhuri mangu vaiva mujiji uye Baba vaifamba zvikuru. "
About Mukadzi waNeymar:
Pazera remukomana we19, Neymar akaita nharo neusikana hwake hwemucheche Carolina Dantas uyo akaita kuti ave nepamuviri.
Akazvara mwana uyo waakatumidza zita rokuti 'Davvi Luca'. Neymar akamira naye zvose kuburikidza nekuzvitakura kwake uye akagara naye pashure. Nepo vazhinji vanotenda kuberekwa kwaDavid Luca kusimbisa ukama hwavo, vashomanana chete ndivo vanoziva kuti Neymar aigara ane rudo uye ane hanya.
About Mwanakomana waNeymar:
Nhabvu yemuBrazil yave ichida mwanakomana wake kubvira paakazvarwa. Chikamu chakakosha chehukama hwake chinosanganisira baba nemwanakomana kutamba bathtub kutamba.
Pazera remakore 3, Davvi Luca akanga atoshandiswa kutamba kukudzwa kwebhora rababa vake vanomudzidzisa. Neymar akatora Davvi Luca kudzidzira chikwata mberi nekumunyora muBarcelona football school FCB Escola mu2017,
The Mohawk Style Makore:
Neymar ndiye anonzi ndiye wokutanga weBrazilian kuti aite mutsvuku weMohawk.
Neymar Mohawl Style. Chikwereti kune Men's Hairstyle Trends
Parizvino, inenge yega yega yevheti yebhora yeBrazil inogadzira bvudzi-rutsvuku rwechigunzva kuti ripiwe kukopa hero yavo. Uyezve, ndiye wokutanga uye wega weBrazil muchengeti wepamberi kuti aonekwe pamberi peasimba guru Magazine Magazine.
VaBrazil vakanga vanyadziswa zvikuru muNeymar nekuda kwezvavakadana 'kutengesa kuderera FC Barcelona '. Kubva pakuzivikanwa kwake, mukurumbira uye hype yakakosha yemunharaunda, Neymar nekambani yake vakabvumirana nemangwana 57 mamiriyoni eAmerica akamuona akatamira kune FC Barcelona. Izvi kune vakawanda zvaionekwa sechigumo chinonyadzisa chekuita.
Chitendero chaNeymar chakatsanangurwa:
Mukristu Wechokwadi Uye 100% YaJesu Kristu:
Neymar mutendi waJesu Kristu kubva paudiki. Anonyatsofarira kushandisa iyo Banner (100% Jesus).
Kunyanya, Neymar ndiye muKristu wechokwadi uye anoita nokutenda. Anoona Upenyu sechimwe chinhu chingava chinonzwisisika kune chero munhu paanoisa Jesu Kristu pakutanga pakati pezvinhu zvose. Zvose Gabriel Jesu uye Edinson Cavani Iva naJesu akafanana Rudo mararamiro akaita seNeymar
Neymar Biography- Rise kune Mukurumbira Nyaya:
Neymar akava mumwe wemigwagwa yakanakisisa yevasiki veSao Paulo, Brazil asati ava nemakore 11. Samba yake yakasununguka uye yakasununguka yeBrazilian inotamba yakaita kuti ave sarudzo yakasarudzwa nevarongi vemahombekiti mumugwagwa avo vakamuita kuti ave nhengo dzemitambo inokosha yemigwagwa.
Akawana ruzivo rwakanyanya pamahombekombe uye zvakaoma pasi pedhiza yebhola nekuda kwekufambisa, unyanzvi hwekudengenyeka uye chiratidzo chisingaoneki chemaoko ake asina simba akasiyiwa kuti apindure mabhora kuva zvinangwa kubva kure kure. Izvi zvakaona Neymar achifambira mberi achibva mumugwagwa wepamugwagwa achienda kunotamba nebhola pamucheto.
Neymar akazoonekwa uye achitsvakwa nevashandi vanobva kumadokero ham, Real Madrid pakati pemamwe mapoka ayo aakaramba kuti aite kutamba yekambani yake yeSantos apo tariro yaive yakakwirira. Mune 2011, akapiwa nzvimbo muchechi yeBrazil yenyika naiye ndiye mukuru Coach, Luiz Felipe.
Akazopedzisira asayirwa neBarcello FC pane 27th yaMay 2013 ye $ 57 madhora. Makore mana gare gare, akasaina naPGG nokuda kwekubhadhara marekhodi $ 263 mamiriyoni. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Tinovonga nekuverenga Neymar Junior Childhood Story yedu pamwe untold biography chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe kana kuti taura nesu!
latif May 25, 2019 Pa 10: 28 am
neymar jr must re-find at real madrid en 2019 and must look for the ball and world cup i love very well and his son and i want to become the little neymar jr
Gabriel Jesu Nyaya Yenyaya Yechidiki Plus Untold Biography Facts